Dr Mrs Mg – Page2– Sharing
Online ပေါ်ကနေ အခမဲ့ဆေးကုပေးမည့် ဒေါက်တာ
Online ပေါ်ကနေ အခမဲ့ဆေးကုပေးမည့် ဒေါက်တာ Covid တွေ အရမ်းဆိုးလာတော့ တော်ရုံတန်ရုံ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရမှာ အဆင်မပြေပါဖူးFever Clinic တွေလဲ မနိုင်မနင်းဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့တော့ တခုပြောချင်တာကCovid ကမှ ဒုက္ခပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပါဖူးတခြားရောဂါတွေကလဲ သေချာ ဂရုမစိုက်ဘဲထားရင် သေစေတဲ့ အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းတွေကလဲဖျားရင်နာရင် ကြည့်မပေးတော့ဘဲfever clinic ကိုလွှဲတာမျိုးကိုသာ အဓိကလုပ်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင် ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင်လိမ္မော် ရွှေထီး ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်ရာထူးတိုးတက်လိုသူများ /ကံနိမ့်၍ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသူများ /အိမ်တွင်းရေး အပူသောကများနေသူများ/ ဈေးဆိုင်ရောင်းမကောင်းသူများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကံတက်ပြီး လာဘ်ပွင့်စေသော အစီအရင် ဖြစ်ပါတယ်။၁. ပြုလုပ်ရမည့် အချိန်က.တနင်္လာနေ့ နံနက် ၅နာရီ ၄၅မိနစ်ပါ။၂. ပြုလုပ်ပုံကတော့
တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ… တစ်ကြိမ်တည်းပြုလုပ်ရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ နည်းလမ်း တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ.. တစ်ကြိမ်တည်းလုပ်ရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ သခွားသီး နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…လှတဲ့သူတိုင်း ဆားဝက်ခြံရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆားဝက်ခြံရှိနေတာတော့ ဘယ်သူမှ ကြိုက်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ ဆားဝက်ခြံတွေဟာ နှာခေါင်း၊ မေးစေ့နှင့် ပါးပြင်တွေမှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပြီး ညှစ်ရင်လည်း ပွါးတတ်တာကြောင့်အတော်စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုးဆိုးလျှင် အပေါက်အကြီးကြီးတွေဖြစ်ပြီး
သင့်အသားအရေကို ကြည်လင်ဖြူဝင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၂) သွယ် သင့်အသားအရေကို ကြည်လင်ဖြူဝင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၂) သွယ်အလှပြင်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင့်မြင့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ အများအပြားရှိနေပေမယ့် သဘာဝပစ္စည်းတွေဟာလည်း သင့်အသားအရေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ၁။ ကြက်ဥအကာကြက်ဥအကာဟာဆိုရင် သင့်အသားအရေပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သလို အညစ်အကြေးတွေကိုလည်း သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆားဝက်ခြံတွေကိုလည်း လျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။ ကြက်ဥကို အနှစ်နဲ့
နေ့သားအလိုက် ပိုက်ဆံဝင်တဲ့ မီးထွန်း ပိုက်ဆံယတြာ ငွေကြေးကံပွင့်စေဖို့ ကံတစ်ခုဖန်တီးယူတဲ့သဘောပါ ။ ပထမတစ်ကြိမ်တင်ပေးခဲ့တုန်းက ရေးတာကိုသဘောမပေါက်ကြဘူး ။ ပထမတစ်ကြိမ်တုန်းကလည်း အောင်မြင်သူတွေ တော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ် ။ ငွေကံပွင့်စေဖို့ ၊ အကြွေးရနိုင်စေဖို့ မီးထွန်းပိုက်ဆံယတြာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ။ ကံပေးသလောက်ရကြမှာပါ တနင်္ဂနွေသားသမီး – နေကြာရွက် ( သို့ ) သစ္စာပန်းရွက်တနင်္လာသားသမီး=
မျက်ခုံးမွှေး ထူထူလေးဖြစ်ဖို့ (၁၀) ရက်အတွင်း သိသာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
မျက်ခုံးမွှေး ထူထူလေးဖြစ်ဖို့ (၁၀) ရက်အတွင်း သိသာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း မျက်ခုံးမွှေး ထူထူလေးဖြစ်ဖို့ (၁၀) ရက်အတွင်း သိသာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းခပ်ထူထူလေးရှိတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးမျိုးကို ပျိုမေတိုင်း လိုချင်ကြတယ်မဟုတ်လား။အခုခောတ်ဆိုရင် မျက်ခုံးမွှေးကိုTattoo ထိုးတာတွေတောင် လုပ်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝ မျက်ခုံးမွှေးအလှနဲ့ မယှဉ်နိုင်တာကိုတော့ ငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။အရည်အသွေးညံ့တဲ့ မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းတာကြောင့်လည်း မျက်ခုံးမွှေးပါးလာစေပါတယ်။မျက်ခုံးမွှေးထူထူလေးရဖို့ သဘာဝအတိုင်း
ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သီလရှင်စာသင်တိုက် စစ်ကိုင်း သကျ ဓီတာ (ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ) စာသင်တိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းအရမ်းကြီးတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ စာသင်သူ သီလရှင်( သိက္ခာရှင်) ပေါင်း အပါး ( ၂၅၀) ကျော်ရှိတယ်။ ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူး။ တိုက်ထဲမှာ ဓမ္မာစရိယ ဘွဲ့ရတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဝိနယဝိဒူ
တသက်မှာတခာဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလွေသာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရဲ့အံတော်
တသက်မှာတခာဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလွေသာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရဲ့ အံတော် (အနီးကပ်ပုံ) ကံထူးလို့ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့. ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် နှင့် ဆံတော်တစ် ဆူ ကိမ်းဝပ်နေတယ် လို့